Na amboako na amboan’olona… | NewsMada
Na amboako na amboan’olona…
Figadrana herintaona, miampy fandoavana lamandy 15.000 euros. Izay no sazy mety hiandry an-dRtoa Christine Lagarde, tompon’andraikitra voalohan’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) amin’izao fotoana izao noho ny raharaham-pitsarana mahavoasaringotra azy amin’izao fotoana izao. Tsy misy ifandraisany amin’ity andraikitra ambony sady lehibe sahaniny amin’izao fotoana izao ity akory izany, fa mahakasika raharaha hafa mihitsy.
Voarohirohy ho nanao an-tandrevaka tamin’ny fanadihadiana raharaha fanodikodinam-bolam-panjakana nataona mpandraharaha frantsay malaza, tamin’ny fotoana naha minisitry ny toekarena sy ny vola frantsay azy mantsy ramatoa ity.
Mandeha eo anivon’ny fitsarana frantsay ankehitriny ny raharaha, ka tena mahaliana sy mahasarika ny mpanara-baovao, tsy any Frantsa ihany, fa saiky manerana izao tontolo izao mihitsy. Tsy mahagaga, satria olona ambony sy manana andraikitra goavana eo amin’ny sehatra ara-bola iraisam-pirenena, ny FMI izany no voakasika. Na inona na inona fandraisany anjara na tsia anatin’izany, ka mahatonga ny raharaha amin’izao sehatra izao, voaantso eny amin’ny fitsarana izy ary miatrika izany.
Izany ny an’ny olona, any ivelany any. Tsy eo imolotra na atao pilia vava fotsiny ny hoe “tsy misy ambonin’ny lalàna”, “tsy misy izany tsimatimanota izany”… Mahalaza ny zava-misy tsara ity fomba fiteny malagasy iray ity : « na amboako, na amboan’olona, rehefa vandana dia kary ». Raha lazaina amin’ny teny hafa dia hoe tsy izahan-tavan’olona na anavahana na iza na iza fa izay diso dia meloka sy mendrika hofaizina avokoa. Aiza ho aiza amin’izany ny toe-javatra mitranga eto amintsika ? Mampieritreritra.